Baardheere - Wikipedia
Magaalo = in Jubaland, SomaliaTemplate:SHORTDESC:Magaalo = in Jubaland, Somalia
Abdullahi Nor Hassan Cadow
Bardhere waa magaalo ku taala koonfurta Soomaaliya waxayna ka tirsan yahay Gobolka Jubada Sare ama loo yaqaan Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
3 Bulshada Baardheere
4 Bardhere iyo Tacabka Beeraha
5 Dalxiiska Bardhere
6 Maamulka iyo Nidaamka Busho
7 Waxbarashada iyo Nolosha Da' Yarta
7.1 Cayaaraha, Jir Dhiska iyo Cayaartoyda Abaabulan
Buundada Bardhere dusha wabiga Jubba
Magaalada Bardhere waa magaalo aad u weyn waxay oo ku taal koonfurta gobolka Jubada Sare ama loo yaqaan Gedo.
Magaca Bardhere wuxuu ka koobanyahay labo qeybood oo kala ah Baar + Dhere Bar waa geed si aad ah uga baxo Bardhere, Wejiba weyn ee Jubba ayaa magaalada labo qeybood u kala bara.
Magaalada Bardhere waxay ka mid tahay magaalooyinkii Soomaaliya ugu horreeyey uguna facaweyn oo laga aasaasey meel ka fog xeebta koonfureed ee dalka Soomaaliya. Bardhere waxay u jirtaa xeebta Baraawe masaafo qiyaastii dhan 250 km. Juqraafi ahaan, Bardhere waxa u dhow Dhulbara oo u qeybiyo dunida waqooyi iyo koonfur). Cimiladeeda Bardhere waa mid diiramad ah, taas oo u sahlineysa in sanadka oo idil beeraha laga faa'ideysankaro marka la istimaalayo waraabka beeraha.
Waxa magaalada Bardhere laga dhisi rabay oo oo gabo-gabo ku sugnaa kahor inta aysan burburin dowldii dhaxe mashruucii biyo xireenka markabley kasoo ahaa mid dowladii dhexe ay rabtay in karoonto laga dhaliyo kadibna looga qeybiyo dhamaan gobolada dalka iyo wadamada dariska Kenya iyo Ethiopia.
Magaalada Baardheere ma sugna waqtigii deegaan rasmi ah noqotey walow ay ku jirto magaalooyinka Soomaaliyeed kuwooda ugu fac weyn. Baardheere waxay aheyd magaalo soo jiidasho leh Soomaaliya oo dhan ayaa looga imaan jiray iyada oo cilmu dalab iyo macalimiin naxwaha yaqaan ah ay u soo shaqo tegi jireen ilaa inta taariikhda lagu hayo. Taariikhyahan Cali Dhuux Maxamuud wuxuu cadeeyay, "...in magaalooyinka koonfurta Soomaaliya kuwa ugu faca wayn ay ku jirto magaalada Baardheere." . Aas aaskii Baardheere, markii hore beerofalato iyo dhalinyaro dugsiyo makacdo ah u soo diin barasho raadsaday aaa degay Baardheere. Waxaa yiri Cali Dhuux Maxamuud.
Baardheere waxay ku jirtey magaalooyinkii istaraajiiga ahaa ee uu gumeystaha saldhigyada ka dhigtey. Qarnigii 19aad ilaa bartimihii qarnigii 20aad ee tagey ayuu gumeystaha marba si u degenaa magaalada Baardheere iyo magaalooyinjka kale ee degmada. Waxaa taariikhda ku cad in taariikhda Miilaadiyada 1890 ilaa 1960kii ay waddamo badan oo Afrikaan ah ay gumeysi gacantii ku jireen iyadoo qoraalo badan oo xusayo dhacdooyin taariikh leh ay ka dhaceen Baardheere. baardheere caadi ma ahan
Baardheere oo mudo aad u dheer deegaan rasmi ah ahayd, waxaa mar walba tirada dadka ay ku salaysanayd marxaladaha nolosha. Dagaalo culculus ayaa ka dhowr jeer ka dhacay degmada Baardheere sidaasna barokac ku riday bulshada. Tusaale sanadadii 1941, 1942 Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa gacan ku haynta magaalada ku loolamay. Sanadkii 1930 Baardheere waxaa degenaa bulsho lagu qiyasay 8,000 oo qof.
Tan iyo bilowgii dagaalka sokeeya ee bilowday 1991, bulshada Baardheere 100,000 boqol kun oo qof ka badan ayaa mar walba ku noolayd. Tirakoobyada waxay u dhexaysiiyaan bulshada magaalada 106,000 ilaa 120,000 oo qof.
Dagaaladii dib u cusboonaaday sanadadii 2006, 2007 iyo 2009 barakacayaal badan ayaa Muqdisho, Balad Wayne ilaa Kismaayo ka yimid ayaa soo dagay magaalada Baardheere.
Xiligii xoriyada wixii ka dambeeyay, xasilooni ayay bulshada reer Baardheere ku noolaayeen. Barakacii ugu balaarnaa wuxuu dhacay sanadkii 1992 markii makii beesha marixaan ay moqdisho kasoosaareen Caydiid ciidamadiisa oo asagana hogaaminaayey beesha hawiya ayey bilaabeen in ayladagalaman dad kii rayid ka haa ee ku noolaa magalada oo walaalaha ahaayeen oo ay ku soodhaweeyeen baardheere abaar tii tabadhee kadib. xataa waxaa dhacday in guryaha lagala baxo colamdii uga caasanayd baardheere. Waxaa run ahaantii ammaan aan lakoobikarin iskaleh Beesha Sade Mareexaan oo aad u qaderisa Qabaa,ilaadka Soomaaliyeed ee deriska la ah, iyo weliba dadka isoo qaxa deeganadooda khaasatan intii ay socdeen dagaaladii sokeeye.
Bardhere iyo Tacabka Beeraha
Baardheere oo caan ku ah soo saarka khayraadka beeraha ayaa waxaa qiyaastii ku yaal ilaa 400 oo ah beeraha waaweyn oo ay iskaashatooyin iyo shaqsiyaad hodan ah leeyihiin iyo ilaa 2,000 oo ah nooca yar yar ee bulshada tabcato.
Baardheere Geedka ay caanka Ku tahay
Xiligii Dawladdaha beeralayda degmada Baardheere waxaa taageero badan siin jirey wasaarada Beeraha Soomaaliya. Agab, keyd abuur iyo adeegyo badan ayay Dawladda ku taakuleyn jirtey beeraladay gobolka Gedo iyo dhamaan gobolada leh dhul beeraadka. Suuqgeynta saraca soo baxa waxaa qaabilsanaa wakaalado iyo waaxyo hoos yimaada Wasaarada Beeraha iyo Xanaaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa.
Maamulka iyo Nidaamka Busho
Maamulka degmada iyo xafiiska duqa magaalada ayaa maamul u ahaa degmada Baardheere. Ilaa burburkii waxaa jirey nidaam talis oo ka koobnaa Gollaha Odayaasha Degmada Baardheere oo hab doorasho ah ku dhaca. Nidaamkaas ayaa inta badan ahaa meel marxaladaha murugsan lagu xaliyo.
Sanadkii 2008 ayaaa waxaa maamulka degmada la wareegay maamulka Al Shabaab oo nabad iyo kala dambeyn soo hoyey. Weli waxaa dhaqan ahaan ka jira Gollihii Odayaasha oo maamulka uu tixgeliyo.
Waxbarashada iyo Nolosha Da' Yarta
Cayaaraha, Jir Dhiska iyo Cayaartoyda Abaabulan
Baardheere da' yarteeda waxay aad u jecelyihiin ciyaarta kubada cagta. Webiga oo leh meelo uu ka saweeyo iyo dhowr goobood oo xaafadaha ku ag yaal oo kubadda lagu ciyaaro ayay idkugu yimaadaan dhalinyarada ciyaaraha kubbada Cagta.
Cayaaraha abaabulan waxaa ka mid ah kuwo ay ku loolamaan dhalinta afarta xaafadood ee magaalada Baardheere ka koobtanahay. Tartamada abaabulan waxaa ka mid ah dabaal Webiga Jubba iyo cayaaraha kubadda cagta oo aalaaba degmooyinka Garbahaarreey, Luuq iyo Beled Xaawo inta badan sanad walba is aragyo xiiso leh fooda is dara.
Tababarayaal aad caan u ah ayay leedahay magaalada Baardheere. Tababare Maamazuu iyo gudoomiyahii muddada dheer daadihinayay ciyaartoyda Baardheere Yaxye Faarax Jaamac ayaa dhowr jeer cayaartoyda Baardheere gaarsiiyay magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo.
Sanadki 2002 kooxda xulka Baardheere koob ayay ka qaadeen dhowr gobol oo isku timid; Gedo, Bay, Bakool, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Koobkaas maanta wuxuu yaal xafiiska Xiriirka Kubadda Cagta ee Baardheere ay u soo hoyisay gobolka Gedo.
Liiska magaalooyinka Soomaaliya dadka ku nool
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Baardheere.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Baardheere&oldid=199985"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Abriil 2020, marka ee eheed 06:27.